यसकारण आउँछ ४० काटेपछि, म’हिलामा फेरी बैं’स
बुढापाकाले भन्ने गर्छन नि, चालिसे लागेछ बैस जागेछ ।’ यो उखान पहिलेको बुढापाका पुस्तामा निकै लोकप्रिय छ । बुढापाकाका अनुसार जीवनमा पहिलो १६ वर्ष र दोस्रो ४० वर्षमा गरी २ पटक बैस जाग्छ रे । हाम्रो समुदायमा महिलाहरु ४० वर्षपछि अर्को स’म्बन्धमा रहेको घ’टनाहरु बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
वि’वाह पश्चात मानिसहरु वैदेशिक रोजगारी, पश्चिमी रहनसहन जस्ता विभिन्न कारण श्रीमान श्रीमती एक अर्काप्रति चासो नदेखाउने, एक अर्काको भावनाको कदर नगर्ने जस्ता स’मस्याले अन्ततः कतिपयको स’म्बन्ध विच्छेद पनि भएको छ । वि’वाह पछि स’म्बन्ध बनाउन पु’रुषवादी समाजमा पु’रुष नै हाबी भएतापनि एक अध्ययनले म’हिला पनि वि’वाहवेत्तर स’म्बन्ध राख्न चाहान्छन्
भन्ने देखाएको छ । अध्ययनमा उल्लेख भए अनुसार ४० वर्ष कटेका म’हिलाको ठूलो संख्या बि’वाह पछि पनि स’म्बन्धमा रहन्छन् । एक अध्ययनले देखाए अनुसार ४० वर्षपछि अर्को स’म्बन्धमा रहनुका विविध कारणहरु छन् । वि’वाहपछि पु’रुषले श्रीमती र छोराछोरीको जि’म्मेवारी उठाउने क्रममा श्रीमतीलाई वे’वास्ता गर्न पुग्छन् ।
र जिम्मेवारी सँगसँगै रोमान्स र समय दुवैमा कमी आउँछ जसको कारण महिला दोस्रो पुरुषसँग आकर्षित हुन्छन् । सानै उमेरमा वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका महिलाहरु विवाहपछि उनीहरु अनेक सामाजिक बन्धनमा रहनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।जसका कारण उनीहरु जीवन अर्कै मोडमा आइपुगेको र आफ्नो जीन्दगीमा अमूल्य समय खेर गएको अनुभव गर्छन् ।
जसको कारण उनीहरु वि’वाहेत्तर स’म्बन्धतर्फ उद्धत हुन्छन् । महिलाहरु अग्लो कद, हृ’ष्टपुष्ठ शरीर र च’म्किलो अनुहार भएको पु’रुषसँग छिट्टै आ’कर्षित हुने भएकाले दोस्रो पु’रुषको सानो सानो कुरामै आ’कर्षित भइहाल्छन् । ४० वर्षपछि म’हिलाहरुले आफ्ना पा र्टनरबाट यौ’न स’न्तुष्टी नपाउने भएकाले दोस्रो पु’रुषतर्फ आ’कर्षित हुने अ’ध्ययनले देखाएको छ ।
वि’वाहपछि आउने अनेक स’मस्या र परिवर्तनपछि म’हिलाहरुमा बच्चा भइसकेपछि झनै धेरै परिपक्कता आउन सक्छ । तर आफ्ना पतिप्रतिको विश्वास भने कम हुँदै जान्छ । उनीहरु बच्चा भइसकेपछि पतिले आफूलाई वे’वास्ता गर्छ भन्ने सोच्छन् जसका कारण बाहिर साथी बनाउन तिर लाग्छन् । ताजा समाचार डटकम बाट साभार ।
यो पनि – के यो’निमा वी’र्य झा’र्दा मो’टाइन्छ रु यस्तो छ रह’स्य…. वी’र्य र शु’क्रकीट फरक कुरा हुन् । वी’र्यमै अ’ण्डकोषमा बनेका शु’क्रकीट पनि हुन्छन् । महिलाको डि’म्बसँग शु’क्रकीटको मिलन सन्तान उ’त्पत्तिका लागि आ’वश्यक हुन्छ । सन्तानको उ’त्पत्ति प्र’मुख रूपमा पु’रुषबाट निस्कने शु’क्रकीट र स्त्रीमा विकसित भएका डि’म्बको मिलनबाट हुन्छ ।
यौ’नस’म्पर्कका बेला पु’रुषको वी’र्य स्ल’खलन हुँदा वी’र्य यो’निको पछिल्तिरको भागमा राखिन्छ । वी’र्यमा भएका करोडौं शु’क्र’कीटमध्ये केही पा’ठेघरको मुख हुँदै पा’ठेघर र त्यसपछि डि’म्बवाहिनी नलीमा पुग्छन् । त्यहाँ प’रिपक्व भएको डि’म्ब (अ’ण्डा) सँग असंख्य शु’क्रकीटमध्ये एकको मात्र मिलन हुन्छ ।
यसरी मिलन हुने प्र’क्रियालाई निषेचन भनिन्छ । शु’क्रकीट र डि’म्बको मिलन भएको कोषलाई युग्मज (ZY’GOTE)भनिन्छ र त्यही युग्मज पछि विकसित भएर शिशु बन्छ । यदि वी’र्यको स्ख’लन यो’निको भित्री भागमा भएको छ भने जति नै धेरै मात्रामा वी’र्य बाहिर निस्किएजस्तो लागे पनि पा’ठेघरको मुखसम्म पर्याप्त शु’क्रकीट पुग्छन् ।
सामान्यत: यसरी वी’र्य बाहिर निस्कनु ग’र्भधारण नहुनुको कारण बन्दैन । परिवार नियोजनको खाने चक्कीले म’हिलाको वजन बढ्ने कुरा गरिन्छ, तर यो विरलै मात्र हुन्छ । सामान्यत: व्यक्तिको वजन कि त शरीरमा बोसोयुक्त तन्तु जम्मा भएर बढ्छ, कि त तरल प’दार्थ जम्मा भएर ।
सन् १९६० तिर यस्ता ग’र्भनिरोधक चक्की उपलब्ध हुँदा त्यसमा विशेष गरेर इ’स्ट्रोजनको मात्रा बढी हुन्थ्यो । त्यसको अधिक सेवनले भोक जगाउने तथा शरीरमा पानी बढी मात्रामा जम्मा हुने भएकाले महिलाको बजन बढेजस्तो देखिन्थ्यो । अहिले पाईने ग’र्भनिरोधका चक्कीमा इस्ट्रोजनको मात्रा सा’ह्रै कम हुने भएकाले त्यस्तो प्र’भाव कम वा विरलै मात्र देखिन्छ ।
ग’र्भनिरोधक उपाय जस्तै कि कन्ड’म लगा’उँदा वी’र्य क’न्डममै जम्मा हुन्छ र कन्ड’मसँगै बाहिर निकालिन्छ । नेपालमा सहज उ’पलब्ध नभए पनि स्पन्ज वा डा’यफ्रामजस्ता साधनले पनि वी’र्यमा भएका शु’क्रकीटसमेतलाई म’हिलाको पा’ठेघरको मु’खभित्र प’स्न दिँदैनन् । अन्य ग’र्भनिरोधको उपाय अपनाउँदा त्यसले वी’र्य स्ख’लनको प्र’क्रियालाई प्र’भावित गर्दैन ।
पु’रुषले ब’न्ध्याकरण गर्दा पनि वी’र्य स्ख’लन हुन्छ नै, फरक यत्ति हो कि उक्त वी’र्यमा शु’क्रकीट हुँदैन । वी’र्य बाहिर ननिस्किए मोटाइन्छ ? वीर्यमा भएका शु’क्रकीटमा हुने प्रज’नन क्ष’मताका कारण त्यसले विशेष स्थान पाएको छ । वी’र्य निर्माणमा धेरै रगत चाहिने भएकाले वी’र्य जोगाउनुपर्ने वि’श्वास धेरै समाजमा पाइन्छ ।
वी’र्य खेर गए पु’रुष कमजोर हुन्छ भनिन्छ, तर यसको वा’स्तविकतालाई पनि हेरौं । एकपल्ट वी’र्यस्ख’लन हुँदा यस्तै ३ देखि ५ मिली (५ मिली भन्नाले १ चियाचम्चा जति) वी’र्य निस्कन्छ । मू’त्रथैलीको मुनितिर दुईतिर वी’र्य थैली हुन्छन्, यसैको रस नै वी’र्यको मुख्य अं’श (४६ देखि ८० प्रतिशत) हो भने पौरुष ग्रन्थिको रस पनि पर्याप्त मात्रामा (१३ देखि ३३ प्रतिशत) हुन्छ ।
अ’ण्डकोष तथा इपिडिडाइमिस (अ’ण्डकोषसंगै जोडिएको एक भाग) बाट आउने रसको मात्रा यस्तै ५ प्रतिशत हुन्छ भने मू’त्रनलीका अन्य ग्र’न्थिबाट आउने रसको मात्रा त्यसभन्दा पनि कम । रसायनिक दृष्टिले हेर्ने हो भने यसमा पानी, श्लेष्म तथा शु’क्रकीटको पोषण तथा वातावरण सु’व्यवस्थित गर्न आवश्यक थुप्रै रसायन हुन्छन् ।
अ’ण्डकोषमा बनेका शु’क्रकीट पनि यही वी’र्य थैलीमा आएर बसेका हुन्छन् र वी’र्यस्ख’लन हुँदा रसका साथसाथै बाहिर निस्कन्छ ।एक चियाचम्चा वी’र्यमा यस्तै ५ देखि ७ क्यालोरी हुन्छ । तुलनाका लागि एक चियाचम्चा घ्यूमा १ सय १२ क्यालोरी हुन्छ । त्यसैले निलिएको अवस्थामा पनि यो पो’षणका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुँदैन ।
फेरि यो कुरा यो’निमा वी’र्य स्ख’लन भएको स्थितिमा पाइने होइन । त्यसकारण वी’र्य यो’निबाट ननिस्किएको कारणले मोटाइदैन्
कस्तो नाइटो भएका महिलाहरू कस्ता कस्ता हुन्छन श्रीमान् र बै’वाहिक जीवनमा तेस्को कस्तो प्रभाव पर्छ
चर्चित दोहोरी गायिका टिका सानुले गाएको यस बर्षकै पहिलो देउसी भैलो गित सार्वजनिक (…